ပန်ဒိုရာ: နတ္ထိရဲ့ ကဗျာဗေဒ
Posted by pandora at 8:05 AM
ဒွတ်ခ... ဒွတ်ခ...း)
လေ့လာဖို့ ယူသွားတယ် ဂျီးဒေါ်ပန်
ဘာမှလည်း မပေါ်ဘူး ပြန်ပြီ
မျောက်စေ့..အဲ. မျက်စိကို နောက်သွားတာပဲ။ ကဗျာဆိုတာ ဂလောက် လေးနက်စင်ကြယ်မှန်းကို မသိခဲ့ပါဘူး။ လေးတယ် နက်တယ်.. စင်ကြယ်တယ်. ဒါဆို ဘာထူးလဲ သူလည်း သုညလေးတစ်လုံးပဲပေါ့။